संकटमा संयमित बजेट - Khabar Break | Khabar Break
रोटरी क्लब अफ मकवानपुरको अध्यक्षमा सांगामी
चट्याङ्ग लागेर बारामा ४ जनाको मृत्यु
मध्यरातमा फेसबुकमा भिडियो लाइभ गरेर युवतीले गरिन् आत्महत्या
सयौँ हात्तीको रहस्यम मृत्यु, महामारीको आशंका
चट्याङ लागेर दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
चलचित्र दानराज आगामी भदौमा छायाँकन हुदैँ
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको संकटबीच संयमित बजेट ल्याएका छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्ष बजेटले अपेक्षा गरेको स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न असफल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने सजगता अपनाएको छ । कोभिड महामारीका कारण स्रोत र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा हुन सक्ने संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवलाई १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट चालू आवको सुरु बजेटको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सानो हो । चालू आवका लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । यस वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा भने आगामी आवको बजेट ३८ प्रतिशत ठूलो छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।
नागरिकताबाट पतिको नाम हटाउने प्रस्ताव, झुक्याएर प्रतिवेदन तयार